महिलाले पिसाव फेरेको भिडियो पोर्न साइटमा ! पीडितको मुद्दा न्यायाधीशले खारेज गरे « Name of Truth News : News Portal in Nepal
महिलाले पिसाव फेरेको भिडियो पोर्न साइटमा ! पीडितको मुद्दा न्यायाधीशले खारेज गरे
प्रकाशित मिति : २०७८, आश्विन, १६, शनिबार ०७:५४
वार्सिलोना, १६ असोज
स्पेनमा महिला अधिकारवादी समूहका तर्फबाट दायर भएको एउटा मुद्दा त्यहाँको अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
महिला सार्वजनिक स्थलमा सामूहिक रूपमा पिसाव फेर्न जाँदा गोप्य ढंगले खिचिएको तस्बिर र भिडियोे दुरूपयोग भएपछि अधिकारकर्मीले दायर गरेको मुद्दा न्यायाधीशले खारेज गरिदिएका हुन् ।
शौचालय अभावमा ८० महिला र किशोरीले सार्वजनिक स्थलमा पिसाव गरेको दृश्यलाई गोप्य भिडियो खिचिएको थियो ।
स्पेनको पश्चिमी सहर सेर्भोको स्थानीय मेला ए मारूसियानमा लुकाइएका क्यामेराबाटे भिडियो खिचिएको थियो ।
क्लोज अप गरिएको भिडियोमा महिलाको गुप्तांग र अनुहार देखिन्छ ।
भिडियोलाई एउटा व्यवसायिक पोर्न वेबसाइटमा राखिएको थियो ।
आफ्नो भिडियो देखेपछि अधिकांश महिलाले दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै सन् २०२० मा त्यहाँको एउटा अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
आफ्नो गोपनियताको अधिकार उल्लंघन भएको र त्यसबारे छानबिन गर्न उनीहरूले माग गरेका थिए ।
तर, वुमन फर इक्विालिटी व्युरोले गरेको मुद्दा न्यायाधीश पाब्लो मुनोज भाजक्युजले खारेज गरिदिएका हुन् । आफ्नो प्रारम्भिक फैसलामा न्यायाधीशले सार्वजनिक स्थलमा भिडियो रेकर्ड भएकोले त्यसलाई अपराध मान्न नसकिने बताएका छन् ।
भिडियोमा महिलाको शारीरिक तथा नैतिक मर्दन गर्ने कुनै आशय नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ । अदालतको फैसला डरलाग्दो भएको पीडितमध्येकी एक महिला जेनिफरले बताइन् ।
भिडियोलाई पोर्न साइटमा अपलोड गरिएको साथीले सुनाएपछि आफू बिक्षिप्त भएको उनले बताइन् । भिडियो देख्दा आफू लज्जित र आत्मग्लानी भएको अन्य पीडितको गुनासो छ ।
भिडियो सार्वजनिक भएपछि जेनिफरजस्तै अन्य पीडितले मनोवैज्ञानिक परामर्श लिएका थिए । अदालतको फैसलाले उनीहरूलाई झन पीडा थपिदिएको छ ।